Warning buying from Apple after applying for the Apple Card | Click to listen to more eTN Podcast Recordings
Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Other • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Fampitandremana fividianana amin'ny Apple rehefa avy nangataka ny Apple Card
Home » Lahatsoratra » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Fampitandremana fividianana amin'ny Apple rehefa avy nangataka ny Apple Card
Ity traikefa ity dia hanazava fa ny Apple Credit Card navoak'i Goldman Sachs dia tsy fiaraha-miasa mandresy amin'ny fividianana vaovao avy amin'i Apple, ary eto no antony.
Tamin'ny talata Apple dia nanambara ny famoahana Apple faha-6 vaovao. Tena faly aho tamin'ny fampiharana fampiharana fanatanjahan-tena vaovao miaraka amin'ny famataranandro ary nanapa-kevitra ny hanafatra iray aho.
Nandeha tany amin'ny Apple Store an-tserasera aho apple.com ary mora ny nahita ilay famantaranandro, nampihatra ny varotra nataoko ary nandeha nankamin'ny pejy nanafarana. Tsy tsapako fa ny fividianana tsotra toy izany dia tsy ho tantin'ny Apple Card Support avy amin'i Goldman Sachs.
Indray mandeha amin'ny pejin-kafatra dia misy safidy roa. Ny iray handoa feno, ny iray handoa onitra maimaimpoana. Ny fientanam-po dia tsy nampientanentana ahy, ka rehefa nandika an'ity safidy ity aho, dia efa nofenoina ho azy ny fangatahako afa-tsy ny daty nahaterahako, ny nomeraom-piarovana ara-tsosialy ary ny vola miditra isan-taona.
Nanampy azy aho ary nanindry azy ary nanolotra ilay fangatahana.
Ny valiny dia: Tsy afaka nanamarina ilay fampahalalana i Apple ary nangataka ahy izy mba hampakatra ireo kopian'ny fahazoan-dàlan'ny mpamily.
Nataoko izany ary naharay hafatra iray hafa aho fa tsy maintsy mieritreritra an'izany i Apple ary handefa mailaka amiko ao anatin'ny 3-4 andro. Tonga haingana be ity mailaka ity. Nilaza tamiko izany fa nolavina ny fangatahako satria tsy voamarina ny mombamomba ahy. Nanolo-kevitra ny hamerenana azy io indray.
Nataoko. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiasa kinova scann avo kokoa aho ary nandefa azy indray. Toy izany koa no nitranga.
Ny fanintelony nampiasaiko ny telefaoniko I mba haka sary ny fahazoan-dàlan'ny mpamily ahy, ary fanintelony io dingana io ihany, nolavina ny fangatahako, satria tsy nahafantatra ahy i Goldman Sachs.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nantsoiko ny laharan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa nomena tamin'ny mailaka.
Henoy izay nitranga manaraka tamin'ity podcast ity. Tandremo!